एक्लो जिन्दगीमा रमाउन सिकाए !  HamroKatha
एक्लो जिन्दगीमा रमाउन सिकाए !
रोवन एटकिंसन "मिस्टर बीन" को जीवन कथा
हाम्रो कथा २०७५ फागुन ७ गते १६:१७
‘मिस्टर बीन’का धेरै जसो फिल्मले एउटै पाठ सिकाउँछ : जीवनमा हामी सबै एक्लो छौँ I आफैलाई खुसी राख्न सिकौं I अरुले आफुलाई खुसी दिन सक्छ भन्ने आसमा कसैले बाच्न नपरोस् I
हाम्रो मुहारमा एउटा हाँसोको बहार ल्याउन गाह्रो हुन्छ । त्यो भन्दा कयौँ गुणा गाह्रो अरूको मुहारमा मुस्कान ल्याउन हुन्छ । तर संसारमा यस्ता महान् व्यक्ति पनि छन्; जो केवल आफू, अन्य एक-दुई जनालाई मात्र नभएर पुरा संसारलाई हँसाइ रहेका छन् । “रोवन एटकिंसन” हास्यव्यग्यको मध्यमबाट संसारलाई हसाउने महान् हस्ती हास्यव्यङ्ग्य विधामा जसको नाम आधुनिक संसारमा सबैभन्दा अग्र पंक्तिमा आउँछ !
तस्वीर : her.ie
“रोवन एटकिंसन” को जन्म ६ जनवरी १९५५, बेलायतमा भएको थियो । उनका बाबु एक किसान थिए र उनकी आमा गृहणी थिइन । तिन दाजु भाइ मध्यका सबै भन्दा कान्छा रोवन, बाल्यकालमा एकदमै लजालु स्वभाव थिए । यद्यपि उनी मान्छेलाई हासाउदा एकदमै खुसी हुन्थे ।
बाल्यकालमा उनी अचम्म-अचम्म किसिमको मुखको रूप बनाएर मान्छेलाई हँसाउने गर्दथे । उनलाई सानै देखि मान्छेलाई मनोरञ्जन गराउन खोज्ने स्वभावका थिए।
स्कुलले जीवनमा हुँदा रोवनले एउटा फिल्म हेरे । जुन फिल्ममा कमेडी भिज्वल देखाइएको थियो I रोवनलाई एकदमै मन पर्‍यो । उनले त्यो उमेर सम्म कलाकारिता; त्यसमा पनि कमेडी गर्ने बारे सोचेकै थिएनन् । उनी एउटा राम्रो विद्यार्थी थिए । उनी आफ्नो जीवनमा एक इन्जिनियर बन्न चाहन्थे ।
रोवनले न्युक्यासल युनिभर्सिटीबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरमा डिग्री हासिल गरे । पछि पुर्नः इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ मै एमएसी गर्नका लागि ‘द कुइन्स कलेज, अक्सफोर्ड’ मा भर्ना भए । जहाँ उनलाई भर्ना हुने क्रममा एउटा स्केच लेखेर प्रस्तुति दिन लगाइयो । जतिबेला सम्म उनले विभिन्न ड्रामा लगायतमा सहभागी भने भएका थिए I तर लेखन उनका निम्ति एकदमै नयाँ कुरा थियो। उनले जुन स्केच बनाउँदै गर्दा यो महसुस गरे कि “उनी यसप्रकारले स्केच कोरेर ड्रामा गर्न मज्जाले सक्छन्”। अर्थात् उनी भिज्वल कमेडी एकदमै राम्रो सँग गर्न सक्छन् । उनलाई महासुस भयो कि उनी यसमै राम्रो भविष्य बनाउन सक्छन् । कलेजमा उनको रिचर्ड कार्डटिस सँग भेट भयो । रिचर्ड कार्डटिस एक लेखक थिए । संगै उनको हावड़ टुटस सँग पनि भेट भयो , जो एक सङ्गीतकार थिए। त्यसपछी यी तिनै जना मिलेर स्केच र प्ले बनाउन थाले । उनीहरूको कामलाई सबैले मन पराए।
उनीहरू उक्त प्ले पश्चात् जोर्न रोयड, एक बिबिसी प्रोड्युसरलाई भेटे । उनले रोवनलाई एउटा टीभी कार्यक्रम गर्ने अवसर प्रदान गरे । अब; २२ वर्षे रोवन सँग जीवनका दुइटा बाटाहरू थिए । एकातिर उनका साथीहरू थिए जो सँग मिलेर उनले राम्रो पैसा कमाउन थालेका थिए भने अर्को तर्फ टिभी कार्यक्रम थियो । जुन रोवनका निम्ति एकदमै नौलो थियो । सँगै चुनौती पूर्ण पनि ! सँग उनले बुझेका पनि थिए कि; त्यहाँ उनको राम्रो काम गर्न सके जीवन धेरै माथि सम्म पुग्न सक्छ । त्यसकारण उनले टिभी कार्यक्रमलाई छनोट गरे । उनले काम गरेको ‘नोट द नयन ओक्लक न्युज’ कार्यक्रम सफल भयो । रोवनको लेखन र कलाकारिताको एकदमै प्रशंसा भयो । सँगै उनलाई अर्को कार्यक्रमको ‘द ब्लाक अड्डर’को प्रस्ताव समेत आयो । उक्त कार्यक्रमका लेखक थिए उनका मिल्ने साथी, रिचार्ड कार्टर । उनी सँग उनले कलेज मै हुँदा काम गरिसकेका थिए।
‘ब्ल्याक एडडर’ सिरिज ब्रिटेन एक सबै भन्दा सफल सिरिज बन्न सफल भयो । रोवन सबै तिर छाउन थाले । उनी लोकप्रिय बन्न थाले।
एक चोटि एक निर्माता कथा बोकेर रोवनलाइ भेट्न आए । यो एउटा संवाद बिनाको भिज्वल कमेडी थियो । कार्यक्रमको नाम ‘चिटीङ्ग’ I अन्ततः चिटिङ्गले रोवनलाई ‘मिस्टर बीन’ बनायो। आज संसारले उनलाई आउनको वास्तविक नामबाट नभएर मिस्टर बिन को नामले चिन्ने गर्छ । उनले जेम्स बार्न, नेभर से नेभर अगेन द्वारा फिल्मी करियर सुरे गरे । ‘डेढ अन टायम’ मा मुख्य भूमिका निभाए । ‘द टल गाए अन्ड द विचेस’ जस्तो फिल्ममा काम गरे । सन् १९९७ मा उनले ‘बीन’ नामक फिल्म निर्माण गरे । फिल्म एकदमै सफल मानियो । उनले पछि यसको सिक्वल पनि निर्माण गरे । उनी सानै देखि जेम्स बोर्नबाट प्रभावित थिए । उनी एक जासुसको रोल गर्न चाहन्थे, यसकारण उनले ‘जोनि इङ्गलिस’ र ‘जोनि इङ्गलिस रिबोर्न’ निर्माण गरे।
सन १९८६ मा सुनित्रा शास्त्री सँग उनको भेट भयो । जसको पिता भारतीय र आमा ब्रिटिस थिइन । सुनित्रा मेकअप आर्टिस्ट थिइन । केही वर्षको प्रेम पश्चात् सन् १९९० मा यी दुई बिच विवाह भयो। उनीहरूको बेन्जमिन र लिली गरी एक छोरा र एक छोरी छन् । सन् २०१४ मा रोवन र सुनित्रा बिच कुनुनी रूपमा सम्बन्ध बिछेद भयो ।
रोवनलाई महँगा कारहरूको एकदमै सोख छ । उनी सँगै “अडी ए 8 , स्कोर सुपर्ब लगायत धेरै लग्ज्सी कारहरू छन् । उनले रेसिन्गमा आधारित ‘टप गियर’ नामको सो पनि गरेका छन् । रोवन एटकिंसन अर्थात् मिस्टर बीन अपुत धनाढ्य बनेता पनि कहिल्यै कुनै विवादास्पद काममा जोड्डीएनन I बरु हर समय तपाईँ, हामी अनि संसारलाई हँसाउन मेहनत गरी रहे र हँसाइ रहेका छन्। आज संसार भरि हामी करोडौको मनमा उनी प्यारा मिस्टर बीनको रूपमा बस्न सफल बनेका छन् र सधैँ बसी रहने छन् ।
तस्वीर : imgur.com